Izindaba - Ithemba lesikhathi esizayo lokuthuthuka kwemishini yokupakisha ezenzakalelayo
Umshini we-Box Cartoning
Umshini we-HTH-100 Cartoning
Umshini we-HTH-100 High Speed ​​Cartoning
Umshini we-HTH-120 Cartoning
Umshini we-HTH-120 High Speed ​​Cartoning Machine
Amathemba okuthuthukiswa kwesikhathi esizayo wemishini yokufaka othomathikhi ehlakaniphile
Ezinye izinkinga ezikhona embonini yemishini yokupakisha umshini we-cartoning yami kufanele ixazululwe ngokushesha okukhulu. Ukuze uhambisane nezinga eliphakeme lomhlaba ngokushesha okukhulu, kusenobuchwepheshe obuningi umshini wezwe lami we-carton okufanele ubufinyelele. Uma imishini yokupakisha ukudla yezwe lami ifuna ukuqhubeka nokuthuthukisa ukusebenza kahle kokukhiqiza, kufanele ixhumanise imishini yokupakisha nemishini yokukhiqiza, iqhubeke ngokunciphisa isikhathi sokulethwa, futhi inciphise izindleko zenqubo yokusakazwa. Ngaphezu kwalokho, izinga lokuzenzakalela lomshini we-cartoning kufanele lithuthukiswe ngokuqhubekayo ukunciphisa ukwehluleka ngokuqhubekayo.
Ukupakisha okuhlakaniphile kuthole ukunakekelwa okwanele nentuthuko emazweni athuthukile, kepha eChina, ucwaningo nentuthuko yokupakishwa okuhlakaniphile nokusetshenziswa kwayo emikhakheni eyahlukahlukene kusesencane. Kepha ubuye waveza ukuthi ngokubuka komunye umbono, noma ngabe isicelo sezwe lami lokupakisha ngobuhlakani sisasalele emuva emazweni athuthukile, imakethe yezwe lami yokupakisha ehlakaniphile inemikhawulo emikhulu yenzuzo elinde ukuthinta.
Ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe, ubuhlakani bube ulwandle oluhlaza okwesibhakabhaka lokuthuthukiswa kwemakethe. Njengemboni yokuphuma kwelanga, inqobo nje uma ihlobene nezimboni ezihlakaniphile, bathole amaphakethe amakhulu. Esikhathini lapho izinga lezehlakalo zokuphepha kokudla lihlala liphezulu ngemishini ezenzakalelayo yamakhathoni, ukupakisha okuhlakaniphile nakho sekugxile ekuthuthukisweni kwemboni yokupakisha. Kuthintwe ezinye zezinto, ukuthuthukiswa kokufakwa okuhlakaniphile eChina kusesekuqaleni, futhi kudingeka amandla amakhulu okushayela ezimakethe ukusiza ukuthuthuka kwayo. Ukupakisha okuhlakaniphile kusho ukuthi abantu bangeze izingxenye ezintsha zobuchwepheshe kuphakethe ngokusebenzisa ukucabanga okusha, ukuze kungabi nemisebenzi eyisisekelo yokupakisha okujwayelekile, kepha futhi nezakhiwo ezithile ezikhethekile.
Ngokuvamile, amazwe angaphandle asebenzisa kuphela ilebula lokurekhoda umlando wesikhathi sokushisa (i-TTI), ilebuli yesikhombisi sokukhula kwamagciwane (MGI) ekudleni okuhlanganisiwe, ilebula yesikhombi se-photochromic, ilebula lokushaqeka ngokomzimba, ukuvuza, ilebuli yokungcola kwe-microbial, kanye nelebuli ithegi yemvamisa yomsakazo (i-RFID), amalebula we-DNA (deoxyribonucleic acid), njll. achazwa njengokufakwa okuhlakaniphile; ngenkathi ukufakwa komkhathi okuguquliwe, ukufakwa kwama-antibacterial, ukufakwa kwe-vinyl adsorption, ukupakisha okumunca umoya-mpilo, ukufudumeza ngokwakho / ukupholisa okuzipholisayo, ukupakisha iphunga lokudonswa kwephunga, ukupakisha kokukhipha okunephunga, ukufakwa komswakama Ukupakisha njll kuchazwa njengokufakwa okusebenzayo.
Njengamanje, isimo sokuphepha kokufakwa kokudla ezweni lami sisabucayi kakhulu, ngezigameko ezinkulu nezincane zokuphepha kokudla ezenzeka minyaka yonke. Ngakho-ke, imakethe yokupakisha ehlakaniphile kufanele iqhubeke nokuthuthuka futhi ubuchwepheshe bokupakisha obuhle kufanele buqhubeke buthuthukiswe ukuqinisekisa ukuphepha kokudla. Njengamanje, ubuchwepheshe bezwe lami obusezingeni eliphezulu busesezingeni eliphansi ngokwengeziwe, futhi kusekhona igebe elikhulu ngobuchwepheshe obuthuthukisiwe bangaphandle. Ukufezekiswa kobuchwepheshe bezwe lami kusekude phambili.
Yini okufanele uyenze uma ukusebenza kwenqola ...
Amathemba okuthuthukiswa kwesikhathi esizayo we-intel ...
Izinzuzo zokupakisha okuzenzakalelayo nemoto ...
Gexiang Industrial, Nanbin Street, Ruian City, Isifundazwe Zhejiang
Sishayele Manje: 0086-13506565432